ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा संक्रमण नियन्त्रण सम्वन्धि तालिम « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा संक्रमण नियन्त्रण सम्वन्धि तालिम
२०७२, २० फाल्गुन बिहीबार ०९:५८ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा संक्रमण नियन्त्रण तथा ह्यान्ड हाईजिन सम्वन्धि तालिम सम्पन्न भएको छ ।
तालिममा ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका इन्फेक्सन कन्ट्रोल बिभागका अमेरिकी चिकित्सक डा. एन्ड्यू ट्रोटर र ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका इन्टेन्सिभिष्ट तथा क्लिनिकल कोअर्डिनेटर डा. सुभाष प्रसाद आचार्यले प्रशिक्षण दिनु भएको थियो ।
बेसिक इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एण्ड कन्ट्रोल तालिममा सहभागि क्लिनिकल स्टाफहरुलाई हरेक लेक्चर पछि प्रश्नोत्तर तथा सामूहिक प्रोजेक्ट वर्क र अन्तिम परिक्षा समेत लिईएको थियो ।